Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Huesca oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 04 Jan 2021. Barcelona ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Huesca oo ay ku booqatay garoonkeeda Estadio El Alcoraz, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1ay ku hoggaamineysay kooxda Barcelona.
Daqiiqadii 27-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay xiddiga reer Hollandee Frenkie de Jong, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Lionel Messi.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-1 oo ay Barcelona kaga soo adkaatay kooxda kaalinta ugu hooseysa kaga kaga jirta kala sareynta horyaalka La Liga ee Huesca oo ay ku booqatay garoonkeeda Estadio El Alcoraz.
Horudhac: Southampton vs Liverpool… (Reds oo doonaysa inay saddex dhibcood hoggaanka horyaalka ku qabato kulanka ay caawa booqanayaan Saints)